ZMI PurPods प्रो समीक्षा, प्रदर्शन र मूल्य | Androidsis
ZMI PurPods प्रो समीक्षा, प्रदर्शन र मूल्य
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | 10/06/2021 20:00 | समीक्षा
फेरी छुनुहोस् Androidsis मा हेडफोन समीक्षा। यस अवसरमा हामीसँग केहि धेरै अद्वितीय व्यक्तिहरू छन् ZMI PurPods प्रो। केहि हेडफोनहरू कि यदि कुनै चीजको लागि उनीहरूले पहिलो क्षणमा ध्यान आकर्षण गर्न व्यवस्थित गर्छन् भने, यो पक्कै तिनीहरूको कारणले हो एयरपड्स प्रोमा ठूलो समानता एप्पल।
जटिल र बिना सब भन्दा प्रसिद्ध हेडफोन मा एक धेरै स्पष्ट "प्रेरणा" विश्वभरि, ZMI PurPods प्रोले TWS हेडसेट बजारमा पूर्ण रूपमा प्रविष्ट गर्न आफ्नो बोली प्रस्तुत गर्दछ जुन धेरैले स्वेच्छाले स्वीकार गर्दछन्। यदि तपाईंलाई एप्पल हेडफोन मन पर्छ, तर तपाईं तिनीहरूलाई किन्न सक्नुहुन्न, यहाँ एक उत्कृष्ट विकल्प छ
1 ZMI PurPods प्रो, डिजाइन भन्दा धेरै
2 अनबक्सिंग ZMI PurPods प्रो
3 यो ZMI PurPods प्रो हो
4 ZMI PurPods प्रो द्वारा प्रस्तुत सुविधाहरू
5 ZMI PurPods प्रो प्रदर्शन चार्ट
ZMI PurPods प्रो, डिजाइन भन्दा धेरै
हामीले सुरुमा भनेजस्तै, डिजाईनयस अवस्थामा एप्पलको एयरपड्स प्रोसँग एकदम मिल्दो मिल्दो छ आकर्षण को पहिलो ZMI PurPods प्रो को। टेक्नोलोजी उपभोक्ताहरू बीच दुई स्पष्ट भिन्न भिन्न पक्षहरू छन्। ती उत्पादनहरू खोज्दै जुन आफ्नो मौलिकताको लागि बाहिर खडा हुन्छ। र तिनीहरू जो बजार मा सबै भन्दा माथि "शीर्ष" उत्पादनहरु को डिजाइन द्वारा आकर्षित छन्, उस्तै समान द्वारा दूर गरिन्छ।
यी ZMI PurPods प्रो हामीलाई प्रदान गर्न सक्ने फाइदाहरूको मूल्यांकन नगरी, जुन हामी तल कुरा गर्नेछौं, यसको रूपहरू र अन्त्यहरू वास्तविक पात्रहरू हुन्। उज्यालो सेतो र colorको छनोट पनि संयोग जस्तो देखिदैन। तर अचम्मको कुरा, डिजाईन तपाईको सब भन्दा शक्तिशाली हतियार होइन जब यो हामीलाई विश्वस्त गर्न आउँछ। होल्ड गर्नुहोस् ZMI PurPods प्रो किफायती मूल्य भन्दा बढी को लागी।
अनबक्सिंग ZMI PurPods प्रो
हामीले यी वायरलेस हेडफोनहरूको बक्समा हेरेका थियौं तपाईंलाई भेट्टाएको सबै कुरा बताउन। जस्तो प्रायः केस हुन्छ, कुनै आश्चर्य वा अप्रत्याशित अतिरिक्तहरू छैनन्। को होल्स्टर / चार्जर हेडफोनको साथ भित्र A चार्ज केबल ढाँचा संग USB प्रकार सी सामान्य भन्दा धेरै छोटो।
प्लस केहि वारेन्टी सम्बन्धित कागजात उत्पादन र ठेठ गाइड प्रयोग गर्नुहोस्हामी संग छ विभिन्न आकारका प्याडहरूको दुई अतिरिक्त सेटहरू। र अधिक केहि छैन।
यो ZMI PurPods प्रो हो
मा हेर्दै ZMI PurPods प्रो को चार्ज केस हामी देख्छौं कि यसको आकार, फेरि कसरी हामीलाई एप्पलको बारम्बार एयरपड्स प्रोको सम्झना दिलाउँछ। यद्यपि यस अवस्थामा, हामी अन्त्यमा कम गोल रेखाहरू अवलोकन गर्दछौं। हामी यसको अगाडि ए देख्छौं बटन, निर्माताको लोगोको साथ, जसले हामीलाई मद्दत गर्दछ जोडी सक्रिय गर्नुहोस् हाम्रो उपकरणहरूको साथ, र रंगमा निर्भर गर्दै, ब्याट्री स्थिति थाहा छ.
Su चुम्बकीय ढक्कन सुरक्षित रूपमा बन्द हुन्छ र हामी राम्रो निर्माण सामग्रीहरू अवलोकन गर्दछौं। तपाईं एक उत्पादन याद गर्नुहोस् कम्प्याक्ट र राम्रो सँगै भेलाखुला ढक्कनको साथसमेत।
तल हामी फेला पार्दछौं लोड पोर्टयस अवस्थामा USB प्रकार- C ढाँचा। दिमागमा राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण विवरण यो हो कि पक्षमा पोइन्ट्स थप्ने बाहेक अरू केहि गर्दैन, त्यो ZMI PurPods प्रोमा छ वायरलेस चार्जिंगधेरै आश्चर्य।
तपाईं अब प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ZMI PurPods प्रो Aliexpres मा केवलe36 यूरो को लागी।
हेडफोन आफैंमा छ "स्टिक" आकार यद्यपि कान मा राखिएको भाग छ "कानमा" ढाँचा र यो संग समाप्त भयो रबर प्याड यति धेरै विचारहरु उत्तेजित। जस्तो कि हामी सधैं भन्छौं, एक ढाँचा वा अर्को विजय प्रत्येक प्रयोगकर्ताको अनुभवमा निर्भर गर्दछ। यस अवस्थामा हामीसँग पनि छ प्याडहरू साटासाट गर्ने सम्भावना छ कि एयरट्याट प्रभाव उत्तम सम्भव छ.
कानको बाहिर रहेको भाग अनुहारमा पूर्ण रूपले अनुकूल छaलाई राम्रोसँग घुमाइएको आकार। अन्त्यमा ती हुन् चार्जिंग केसमा उत्तम फिटको लागि चुम्बकीय पिनहरू। तिनीहरू पनि सुसज्जित छन् सेन्सर छुनुहोस् प्लेब्याक नियन्त्रण को लागी र निकटता सेन्सर.
ZMI PurPods प्रो द्वारा प्रस्तुत सुविधाहरू
जस्तो हामीले टिप्पणी गरेका थियौं, अधिक प्रसिद्ध हेडफोनको समानता यसको सबैभन्दा उल्लेखनीय पोइन्ट होइन। हामी त्यो भन्न सक्छौं ZMI PurPods प्रो बाकी बाट बाहिर खडा, विशेष गरी यसको वर्गमा जुन यो स्थित छ, यसको लोडमा ब्याट्री र स्वायत्तता। हामीले भेट्टायौं 490 mAh चार्ज। र एक क्षमता M 48 एमएएच हेडफोन प्रत्येक। यो हामीलाई प्रदान गर्दछ hours० घण्टा भन्दा बढीको कुल स्वायत्तता चार्ज गर्न आवश्यक पर्दैन।
थप रूपमा, यो जान्न रोचक छ कि ZMI PurPods प्रो छ छिटो चार्ज। यसैले, एक लोड संग १ minutes मिनेट हामी लोडको %०% सम्म लिन सक्छौं हेडफोनमा। Y केवल minutes मिनेट को चार्ज संग, गन्नुहोस साढे। घण्टाको लागि स्वायत्तता। र यो पनि जान्नको लागि उल्लेखनीय छ कि हामी तिनीहरूलाई कुनै पनि वायरलेस चार्जरसँग प्लगको आवश्यकता बिना चार्ज गर्न सक्छौं। तपाईंको किन्नुहोस् ZMI PurPods प्रो सबै भन्दा राम्रो मूल्य।
La सक्रिय आवाज रद्द जब हामी वायरलेस हेडसेट खरीद गर्ने बारे सोच्दछौं यो सब भन्दा बढि खोजी गरिएको सुविधाहरू मध्ये एक हो। ZMI PurPods प्रो सुविधा तीन माइक्रोफोनहरू यसका लागि र वास्तवमा राम्रो अनुभव प्रस्ताव गर्नुहोस् जब यो हाम्रो वरिपरि रहेका सबै हल्लालाई शान्त गर्न आउँदछ। तर यदि हामी रनको लागि बाहिर जान्छौं, वा हामी नजिकै के हुन्छ भनेर सजग हुन चाहन्छौं भने हामी सक्रिय गर्न सक्दछौं पारदर्शी मोड जसको साथ हामी बाह्य आवाजहरू क्याप्चर गर्न सक्छौं.
ZMI PurPods प्रो पनि संग सुसज्जित छन् निकटता सेन्सर। केहि धेरै उपयोगी को लागी यदि हामीले ईयरफोन हटायौं भने ध्वनि प्रजननको स्वचालित रूपमा रोक्नुहोस्। यो पनि छ टच सेन्सर जुन हामी कन्फिगर गर्न सक्छौं कमाण्डहरु को4प्रकार को साथ स्वाद गर्न।
अन्तमा, एक महत्त्वपूर्ण विवरण ZMI भएको छ पहिलो फर्म आफ्नो हेडफोनमा नवीन ब्लुटुथ .5.2.२ जडान प्रविधि समावेश गर्ने। यो मानिएको छ कि जडान यो पनि स्थिर हुनेछ २०० मीटरको दूरीमा, केहि चीज जुन हामी विस्तृत रूपमा प्रमाणित गर्न सकेनौं र त्यो कागजमा अलि बढी विज्ञान कथा जस्तो देखिन्छ।
ZMI PurPods प्रो प्रदर्शन चार्ट
मोडेल PurPods प्रो
कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.2
शोर रद्द SI
ब्याट्री चार्ज केस 490 mAh
हेडफोन ब्याट्री 48 mAh
ताररहित चार्ज गर्दै SI
कुल स्वायत्तता 40 घण्टा सम्म
पानी / धुलो प्रतिरोध IPX4
चार्ज केस उपायहरू 52 x 63 x 23.4 मिमी
हेडफोन मापन 37.5 x 23 x 25.6 मिमी
मूल्य 36.06 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् ZMI PurPods प्रो
ब्याट्री जीवन तीन पूर्ण चार्ज चक्रको साथ 40 घण्टा सम्म र छिटो र वायरलेस चार्ज संभावनाहरू।
कनेक्टिविटी टेक्नोलोजीको साथ नवीनता ब्लूटूथ 5.2
टच नियन्त्रणहरू र सेन्सर निकटता
अधिकतम उर्जा भोल्यूमको साथ उच्चतम बिन्दुमा यो रहन्छ थोरै छोटो, विशेष गरी आउटडोरहरूमा सक्रिय आवाज कम गर्न बिना।
La चमकदार सेतो फिनिश मारिएको छ र स्क्र्याचहरू तत्काल सजिलै देख्न सकिन्छ।
कम भोल्यूम पावर
संवेदनशील सामग्री स्क्र्याच गर्नुहोस्
ZMI PurPods प्रो
मा पोष्ट गरिएको: 10 जून 2021 को
अन्तिम संशोधन: 10 जून 2021 को
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » हाम्रो बारेमा » समीक्षा » ZMI PurPods प्रो समीक्षा, प्रदर्शन र मूल्य
एन्ड्रोइडमा क्यालोरी गणना गर्न best उत्तम अनुप्रयोगहरू